Zviuru makumi mashanu zvematani emanyowa manyowa ekutsvaga mutsara - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Kuvandudza zvakasvibirira zvekurima, isu tinofanirwa kutanga tagadzirisa dambudziko rekusvibiswa kwevhu. Zvinetso zvakajairika muvhu ndeizvi: kuumbika kwevhu, kusaenzana kwemamineral chikafu chiyero, yakaderera organic zvinhu zvirimo, kudzika kwakadzika, ivhu acidification, ivhu salinization, kusvibiswa kwevhu, nezvimwe. Kuti igadzirise ivhu kuti rikure remidzi yezvirimwa, izvo zvinoitika zvemuviri. ivhu rinoda kuvandudzwa. Natsurudza zvemukati mevhu, kuti pave nemapellets uye zvishoma zvinhu zvinokuvadza muvhu.
Isu tinopa maitiro dhizaini uye kugadzira kweiyo yakazara seti ye organic fetiraiza yekugadzira mitsara. Organic mafetiraiza anogona kugadzirwa nemethane masara, marara ekurima, zvipfuyo uye huku yehuku uye tsvina yemasipareti. Tsvina yemanyowa iyi inoda kumwe kugadziriswa isati yashandurwa kuita mafotereza ekushambadzira ehupfumi hwekutengesa. Iko kudyara mukushandura marara kuita hupfumi kwakakodzera kwazvo.
Iyo tambo yekugadzira yemanyowa manyowani manyowa neinoburitswa pagore matani zviuru makumi mashanu anoshandiswa zvakanyanya mukugadzira manyowa mafetiraiza nekurima tsvina, zvipfuyo uye huku manyowa, sludge nemarara emumaguta sezvinhu zvakasvibirira zvigadzirwa. Iyo tambo yekugadzira haigone chete kushandura akasiyana marara emanyowa kuita fetiraiza, asiwo inounza hukuru hwezvakatipoteredza nehupfumi.
Organic fetiraiza yekugadzira mutsara zvigadzirwa zvinonyanya kusanganisira hopper uye feeder, dhiramu granulator, dryer, roller roller sieve muchina, bhaketi chitakuriso, bhandi rinotakura, muchina wekurongedza uye zvimwe zvekubatsira michina.
Yakashandiswa zvakanyanya mbishi zvigadzirwa
Mutsetse wekugadzira manyowa mutsva unogona kuiswa pazvinhu zvakasiyana-siyana zvehupenyu, kunyanya mashanga, zvisaririra zvekudhakwa, zvisaririra zvebhakitiriya, mafuta akasara, zvipfuyo nehuku yehuku nezvimwe zvinhu zvisiri nyore kugaya. Inogona zvakare kushandiswa pakurapa humic acid uye tsvina sludge.
Izvi zvinotevera kupatsanurwa kwezvinhu zvakasvibirira mumitsara yekugadzira fetiraiza:
1. Tsvina yezvekurima: mashanga, zvisaririra zvebhinzi, slag yekotoni, mupunga, nezvimwe.
2. Manyowa emhuka: musanganiswa wemanyowa ehuku nemanyowa ezvipfuyo, senzvimbo dzekuuraira, tsvina kubva kumisika yehove, mombe, nguruve, hwai, huku, dhadha, hanzi, weti yembudzi netsvina.
3. Maindasitiri marara: zvakasara doro, vhiniga zvisaririra, mufarinya zvakasara, shuga zvisaririra, furfural masara, nezvimwe.
4. Tsvina yemumba: chikafu chekudya, midzi nemashizha emuriwo, nezvimwe.
5. Sludge: sludge kubva munzizi, mapaipi, nezvimwewo.
Mutsetse wekugadzira we organic fetiraiza unosanganisira dumper, musanganisi, crusher, granulator, dryer, inotonhorera, muchina wekupakira, nezvimwe.
Iyo nyowani yemuchina fetiraiza yekugadzira tambo ine hunhu hweyakagadzikana kuita, kushanda kwakanyanya, kuri nyore kugadzirisa uye hupenyu hwakareba hwebasa.
1. Izvi zvakasiyana hazvisi chete zvinokodzera manyowa mafetiraiza, asiwo kune zvipenyu organic manyowa anowedzera anoshanda mabhakitiriya.
2. Iyo dhayamita yefetiraiza inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Mhando dzese dzemanyowa ekugadzira fekitori anogadzirwa mufekitori yedu anosanganisira: manyowani manyowani manyowa, dhisiki magiramufura, mapuratifomu eforoma, goromarara, nezvimwe. Sarudza magranulator akasiyana kuti abudise zvidimbu zvemhando dzakasiyana.
3. Inoshandiswa zvakanyanya. Inogona kurapa zvakasiyana mbishi zvigadzirwa, senge mhuka tsvina, zvekurima marara, yekuvirisa marara, nezvimwe. Zvese izvi zvisikwa zvakasvibirira zvigadzirwa zvinogona kugadziriswa kuita mabatch e granular anotengesa organic manyowa.
4. High kushandisa michina uye yakakwirira nemazvo. Izvo zvinoshandiswa system uye yekupakisha muchina inodzorwa nemakomputa uye zvoga.
5. Hunhu hwepamusoro, kugadzikana kuita, kushanda kuri nyore, yakakwira automation degree uye hwakareba hupenyu hwebasa. Isu tinotora yakazara nhoroondo yemushandisi ruzivo kana tichigadzira uye kugadzira michina yemafetireza.
1. Fekitori yedu inogona kubatsira kupa chaiyo hwaro hwetsetse kuronga mushure mevatengi zvigadzirwa maodha zvasimbiswa.
2. Iyo kambani inonyatso kutevedzera zvine chekuita nehunyanzvi zviyero.
3. Bvunzo maererano nezvakakodzera mirau yemidziyo bvunzo.
4. Kunyatsoongorora chigadzirwa chisati chabuda mufekitori.
Dzokororwazve zvipfuyo uye huku yehuku uye zvimwe zvigadzirwa mbichana zvakanyatsopinda munzvimbo yekuvirisa. Mushure mekumwe kuvirisa uye yechipiri kuchembera uye kurongedza, hwema hwezvipfuyo nehuku yehuku inobviswa. Fermented bacteria inogona kuwedzerwa padanho rino kuora iyo yakakora tambo mukati mayo kuitira kuti chidimbu saizi zvido zvekupwanya zvinogona kusangana ne granularity zvinodiwa zvekugadzira granulation. Iyo tembiricha yezvinhu zvakasvibirira inofanira kunyatso kudzorwa panguva yekuvira kuti idzivirire tembiricha yakanyanyisa uye ititise zviitiko zvehutachiona nema enzymes Kufamba pafiripi michina uye hydraulic mafiripi michina anoshandiswa zvakanyanya mukubvarura, kusanganisa uye kukurumidza kuvirisa emastacks.
Iyo yakaviriswa zvinhu kupwanya maitiro anopedzisa yechipiri kuchembera uye kuisira maitiro kunogona kushandiswa nevatengi kusarudza semi-yakanyorova zvinhu crusher, inoenderana nehunyoro hwehunhu hwezvinhu zvakagadzirwa munzvimbo dzakasiyana siyana.
Mushure mekupwanya mbishi, wedzera zvimwe zvinovaka muviri kana zvinobatsira zvekubatsira zvinoenderana nefomula, uye shandisa musanganisi wakakombama kana wepamusoro panguva yekumhanyisa kuita kumutsa mbishi uye kuwedzera zvakaenzana.
Pamberi pegirazi, kana hunyoro hweiyo mbishi hwakapfuura 25%, nehumwe hunyoro uye saizi yechimedu, mvura yacho inofanira kunge iri pasi pe25% kana dhiramu rinoshandiswa kuomesa.
Mushonga mutsva we organic fetiraiza unoshandiswa kugadzira zvinhu zvakasvibira mumabhora kuti uchengetedze hutachiona. Kupona kwehutachiona hwehutachiona uchishandisa iyi granulator inopfuura 90%.
Hunyoro hwemukati weiyo granulation particles ingangoita 15% kusvika 20%, iyo inowanzo pfuura tarisiro. Zvinoda michina yekuomesa kuti ifambise kufambisa nekuchengetedza fetereza.
Chigadzirwa chakaomeswa chinopinda chinotonhorera kuburikidza neyakaendesa bhandi. Iyo inotonhorera inotora mweya-unodziya kutonhora kupisa chigadzirwa kunyatso bvisa zvakasara kupisa, nepo ichiwedzera ichideredza mvura zvemukati zvezvimedu.
Isu tinopa yemhando yepamusoro uye yepamusoro-yekuita dhiramu sieving muchina kuti uwane kurongeka kwezvinhu zvakadzokororwa zvinhu uye zvigadzirwa zvakapedzwa. Izvo zvinhu zvakashandiswazve zvinodzoserwa kune crusher kuti ienderere mberi nekugadziriswa, uye chigadzirwa chakapedzwa chinosvitswa kumushini wekuputira muchina kana zvakananga kune otomatiki ekuputira muchina.
Chigadzirwa chakapedzwa chinopinda mumuchina wekurongedza kuburikidza nebhandi rinotakura. Ita huwandu uye otomatiki kurongedza kweakapedza zvigadzirwa. Muchina wekutakura une huwandu hwakawanda hwehuwandu uye hwakanyanya kurongeka. Inosanganiswa nemuchina wekusona wekutakura une rinosimudzwa patafura. Mumwe muchina unoshanda zvakasiyana uye unoshanda. Sangana nezvinodiwa pakurongedza uye nharaunda yekushandisa yezvinhu zvakasiyana.